बाइबलका कथाहरू: येशूको जन्मदेखि मृत्युसम्म - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
परमेश्वरले मरियम नाउँकी एउटी असल युवतीकहाँ गब्रिएल स्वर्गदूतलाई पठाउनुहुन्छ। मरियमले एउटा बालक जन्माउनेछे र त्यो बालक सधैंभरि शासन गर्ने राजा हुनेछ भनी स्वर्गदूतले मरियमलाई बताउँछन्। त्यो बालक येशू हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म गोठमा भयो। उहाँ जन्मनु हुँदा गोठालाहरू उहाँलाई भेट्न आएका थिए। केही समयपछि पूर्वका मान्छेहरूलाई एउटा ताराले डोऱ्याउँदै यो सानो बालक भएको ठाउँमा ल्याउँछ। तर वास्तवमा त्यो तारालाई चलाएर पूर्वका मान्छेहरूलाई येशूसम्म पुऱ्याउने को थियो? अनि येशूलाई मार्ने प्रयास कसरी विफल भयो? यी कुराहरू हामी यो भागमा सिक्नेछौं।
यसपछि १२ वर्षको उमेरमै येशूले मन्दिरका शिक्षकहरूसित कुरा गर्नुभएको विषयमा हामी पढ्नेछौं। यसको १८ वर्षपछि येशूले बिप्तस्मा लिनुहुन्छ। बप्तिस्मापछि, उहाँले परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्न र सिकाउन सुरु गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँलाई यही काम गर्न पृथ्वीमा पठाउनुभएको थियो। यो काम पूरा गर्न येशूले १२ जनालाई छानेर आफ्ना प्रेरितहरू बनाउनुहुन्छ।
येशूले थुप्रै अचम्मलाग्दा कामहरू पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले केही साना माछा र रोटीले हजारौंको पेट भर्नुहुन्छ। उहाँले बिरामीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र मरेकाहरूलाई समेत बिउँताउनुहुन्छ। अन्तमा, येशूले मर्नुभन्दा अगाडि के-के गर्नुभयो अनि उहाँ कसरी मारिनुभयो, त्यसबारे पनि हामी सिक्नेछौं। येशूले लगभग साढे तीन वर्षसम्म प्रचार गर्नुहुन्छ। भाग ६ मा लगभग ३४ वर्षमा भएका घटनाहरूबारे हामी पढ्नेछौं।